ဇွန် 1910 ။
ဒါဟာအနာဂတ်သို့ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ရံဖန်ရံခါမှန်သည်။ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသမိုင်းအများအပြားစာမျက်နှာများပေါ်တွင်တယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကောင်းသောတရားသဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်သည်ရမည်ဟု၎င်း၏ဖြစ်လျက်ရှိညာဘက်အဖြစ်။ တစ်ဦးကမိတ်ဆွေအနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားရန်နောက်ထပ်အကြံပေးမဟုတ်ဘူး။ အနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုသောသူတစ်ဦးကအကြံပြုခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းမထားဘူး။ သူ့ပုံစံက။ ဒါပေမယ့်အနာဂတ်သို့ကြည့်ရှုသူမြား၏, အနည်းငယ်မျှသာသူတို့ကြည့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိကြ၏။ သူတို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တွေ့မြင်ပြုလျှင်ကြောင့်အနာဂတ်မှာသူတို့ကြည့်သောအခါသူတို့သိမွငျသောအရာကိုသိသောအတိတ်ဖြစ်လာသည်တဲ့အခါမှသာဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်းသဘာဝကျကျအနာဂတ်မှာသို့ရှုမြင်နေလျှင်အနည်းငယ်စစ်ဆင်ရေးကနေမဆိုအကျိုးရှိရရှိနိုင်ကြသည်သော်လည်း, မိမိကြည့်ရှုရန်ဆက်လက်မအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိ၏။ ထိခိုက်မှုကတော့ looker သူမြင်သည်ထင်သောအရာကိုခန့်မှန်းထံမှနီးပါးလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုလာပါတယ်။
တဦးတည်းသူသည်မိမိအာရုံနှင့်အတူဒါပေအနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ရှုမြင်ပါလျှင်, ထို, သူ့ astral အာရုံဖြစ်၏ သို့မဟုတ်သူမဟာဌာနနှင့်အတူအကြောင်း, စိတျ၏စှမျးရှိ၏ သူသူသည်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာနှင့်ရှုမြင်ရသောကမ္ဘာ့အရောမွှေဖို့မစုံစမ်းမပေးနိုင်အောင်လုပ်နေတာမအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိ၏။ သူကအခြားကမ်ဘာပျေါတှငျတှေ့မွငျရသောအရာကိုဤလောက၏အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားသောအခါသူရှုပ်ထွေးဖြစ်လာ; သူမမြင်စဖူးသောအရာကိုဆက်စပ်နှင့်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျအနာဂတျမှာယင်း၏အရပျသို့က fit မနိုင်, နှင့်သောသူသည်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်လုပ်ခဲ့တယ်သော်လည်းဒါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များမှလျှောက်ထားသည့်အခါကာလ၌, မထုံးစံ၌, မအရပျ၌ခန့်မှန်းတဲ့အတိုင်းဒီပေါ်ပေါက်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကသူ့ခန့်မှန်းချက်အပေါ်မှီခိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မြင်သည်ဖြစ်စေ, အနာဂတ်သို့ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူသူကိုမြင်လျှင်သို့မဟုတ်ကအကြောင်းတ္ထုကိုကြည့်ပါဖို့ကြိုးစားနေတစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကလေးသူငယ်အခကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်အခါ, ကအတော်လေးကျေနပ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏နားလည်မှုနှင့်ကရှုမြင်အရာကိုတရားအများအပြားအမှားတွေစေသည်။ ဒါဟာတ္ထုများအကြားစပ်လျဉ်းမဟုတ်သလိုအကွာအဝေးတန်ဖိုးမနိုင်။ အဝေးသင်ကလေးငယ်ကိုအဘို့မတည်ရှိပါဘူး။ ဒါဟာသူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့နှာခေါင်းကိုကိုင်ရေးသားထားပါတယ်ကြောင့် chandelier ရောက်ရှိပါဘူးဘာကြောင့်နားမလညျပါဘူးသလောက်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူ chandelier ဆုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုသောသူတစ်ဦးကဖြစ်ရပ်များကိုမြင်သူကမြင်သည်ထားတဲ့အတွက်သူဟာကမ္ဘာကြီးကိုမြင်သောအရာကိုအကြားစပ်လျဉ်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာအဖြစ်အဘယ်သူမျှမစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ပေါ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ကြောင်း fancies, သူသည်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဒါကြောင့်သူကရှာနေသောမှာအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ပေါ်ရသောထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏အချိန်ကိုခန့်မှန်း။ အတော်များများကခန့်မှန်းဟောကိန်းထုတ်မဟုတ်အမြဲအဖြစ်သော်လည်း, စစ်မှန်တဲ့လာလုပ်ပါ။ လူတွေကသူတို့မှန်ကန်သောဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ဟောကိန်းများ၏ရာမပြောနိုင်သောကွောငျ့, အတွင်းအာရုံ၏ clairvoyance သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုမှုအားဖြင့်အနာဂတ်သို့ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသူများကို၏ဟောကိန်းများအပေါ်မူတည်သည်ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ပါပဲ။
များသောအားဖြင့် "အတွင်းလေယာဉ်" သို့မဟုတ် "astral အလင်း," သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအခွင့်အရေးတခုသာပျက်သော်ဟုခေါ်ကြသည်အဘယျသို့ကနေလာမယ့်ခန့်မှန်းချက်အပေါ်မူတည်သောသူတို့က, အကြောင်း, သူတို့ကိုယ်ပိုင်တရားသဖြင့်စီရင်သည်။ တဦးတည်းကိုယ်အဘို့အမှုအရာများနှင့်အခြေအနေများစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်ကြိုးစားနေအတွက်လုပ်စေခြင်းငှါ, သို့သော်များစွာသောအမှားတွေအတွက်သူသာသင်ယူခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်, မိမိအမှားကိုနေဖြင့်သိရှိလာ; သူကအခြားသူများကိုဟောကိန်းများအပေါ်မူတည်မှသိရှိလာလျှင်သူသည်အသံတရားစီရင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမည်, သော်လည်း။ ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ခန့်မှန်းကိုဖန်ဆင်းသောအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်ဒြေအခြားအာရုံသို့မဟုတ်စှမျးမသက်ဆိုင်သောကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များဟောကိန်းထုတ်တဲ့သူတစ်ဦးကသူတို့၏လာမယ့်စစ်မှန်တဲ့မရှိဧကန်အမှန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သာမြင်သည်သို့မဟုတ်မှသာကြားသောသူတဦးတည်းနှင့် imperfectly နှင့်သောသူမူကားကိုမြင်လျှင်အဘယ်အရာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြားလျှင်, တခြို့ကဏ်ဍအတွက်မှန်ကန်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ကား, မိမိခန့်မှန်းအပေါ်အားကိုးတဲ့သူတွေကိုရောထွေးဖို့။ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များခန့်မှန်း၏တစ်ခုတည်းသောသေချာလမ်းကသူ့အာရုံသို့မဟုတ်အသိဥာဏ်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်မိမိစှမျးရှိသည်ဖို့ခန့်မှန်းသူတဦးတည်းအဘို့ဖြစ်၏ ကြောင်းအမှု၌အသီးအသီးအဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်ဒြေအခြားသူများနှင့်ဆက်စပ်သောမည်ဖြစ်ပြီးအားလုံးဒီတော့သူတို့တစ်တွေသူသည်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာသည်သူ၏အရေးယူနှင့်စပ်လျဉ်း၌သူ၏အာရုံကိုအသုံးတတ်နိုင်သောနဲ့သလောက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်သောပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
မေးခွန်းများ၏အများကြီးပိုအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: မှန်ပါသလား? တဦးတည်းအတွင်းအာရုံကိုသုံးပါနိုင်လိမ့်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏အဖြစ်အပျက်များနှင့်အခြေအနေများကသူတို့ကိုပြန်ပြောပြလျှင်, သူ့ကိုသူအသက်ရှင်တော်မူသည်ဘယ်သူကိုတို့တွင်လူပေါင်းကျော်တစ်ဦးမတရားအားသာချက်ပေးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်, လက်ယာမဟုတ်ပါဘူး။ အတွင်းအာရုံ၏အသုံးပြုမှုကိုအခြားသူများပြုမိခဲ့ပြီးအဘယ်အရာကိုမြင်မှလူတ enable မယ်လို့; အဖြစ်ဧကန်အမှန်လေထုထဲတွင်တစ်ဦးဘောလုံး၏ဆမ်းအဖြစ်အချို့သောရလဒ်များကိုဆောင်ကြဉ်းလို၏မြင်တတ်သော၎င်း၏ကျဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ တဦးတည်းတွေ့ခဲ့ရင်ဘောလုံးကိုပစ်လွှတ်လိုက်တယ်နှင့်၎င်း၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကွေးအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါကလဲကျမယ်လို့ရှိရာ, သူတိကျစွာခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ တဦးတည်းပြီးသားစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးစက်ဝိုင်းထဲမှာသို့မဟုတ်ပြည်နယ်၏ကိစ္စရပ်များကို၌ပြစ်မှားမိခဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အတွင်းစိတ်အာရုံကိုသုံးပါနိုင်လျှင်ဒီတော့သူကပုဂ္ဂလိကဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်အရာကိုမမျှတအားသာချက်ယူပုံကိုသိလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ပုံဖော်နိုင် သူ့ကိုယ်သူသို့မဟုတ်သူစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဘယ်သူကိုရှိသူတို့အကြိုးအဖြစ်သူ၏လုပ်ရပ်များ။ ဒီအားဖြင့်သူရေးရာဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အကဲအမှူးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုနှင့်အခွင့်ကောင်း ယူ. ထိုကဲ့သို့သောသည်သူ၏အဖြစ်အာဏာသိမ်းယူကြသည်မဟုတ်သူကိုအခြားသူများအားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လူယောက်ျားသည်အနာဂတ်သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မှန်ကန်စွာအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အဘို့အမှန်ဖြစ်နိုင်မီထိုကွောငျ့, သူသည်အာရုံ၏တပ်မက်ခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်း, အမျက်ဒေါသ, မုန်းတီးမှုနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကျော်လွှားကြရမည်ဖြစ်သည်, သူသည်ဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ရမည်။ သူကအပိုင်သို့မဟုတ်လောကီအရာအမြတ်ရှိသမျှတို့ကိုအလိုဆန္ဒမှအခမဲ့ဖွစျရမညျ။